Rayon du Soleil #Full Apartment in Heritage Town - I-Airbnb
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Anarkali
4. Indawo yokuhlala ephephile njengoba ingekho i-AC emaphakathi, akukho ukwabelana ngezikhala.
Lolu hlu olweyunithi yonke yefulethi enamakamelo okulala ama-2 nezindlu zokugezela ezi-2. Ikamelo ngalinye line-balcony. Ifulethi lethu elisanda kwakhiwa lisemgwaqweni omuhle, ohlala abantu enhliziyweni yeTamil Quarter.
Ikhanya futhi inomoya, ifulethi linikeza indawo yokuhlala ebanzi.
Njengoba uvula umnyango wangaphambili wamukelwa endaweni enkulu yokuhlala eholela ekhishini elivulekile / indawo yokudlela. Igumbi lokulala lisekupheleni kwefulethi futhi liholela kuvulandi omncane.
Ifulethi linefenisha yetiye eyenziwe ngezandla futhi izivakashi ziyakwazi ukufinyelela ekhishini lesimanje elivulekile.
Ifulethi linelanga futhi lithulile futhi lilungele ukuphumula ngemva kosuku lokuvakashela amasayithi wendawo noma ngemva kohambo lokuthenga.
I-St Theresa Road yindawo yokuhlala ezungezwe izakhiwo ezintsha kanye nesitayela esidala, izindlu zendabuko zaseTamil. Kukhona indawo yokubhaka enkulu ngomzuzu ukusuka efulethini nasezitolo ezinkulu phakathi nemizuzu emi-5. Umgwaqo utholakala endaweni yezitolo e-Pondicherry yakudala eneGrand Bazaar ngakolunye uhlangothi kanye nePetit Bazaar ngakolunye uhlangothi (ngasinye sihamba imizuzu eyi-10 ukusuka ku-St Theresa Road. I-Grand Bazaar ikakhulukazi iyi-warren of alleyways. kugcwele izitolo ezincane ezidayisa impahla yasendlini, izithelo, imifino kanye nezimbali.Kunemakethe yezinhlanzi ngakolunye uhlangothi okuyindawo ebukekayo lapho kudayiswa zonke izinhlobo zezinhlanzi ezintsha nokudla kwasolwandle.Kuyipharadesi labathengi kuphela kodwa nalabo abathwebuli bezithombe phakathi kwenu abafuna ukuthwebula imibala yendawo.
Le ndawo iphinde ibe nezindawo zokudlela ezinhle nezingabizi kakhulu, okuhlanganisa i-Surguru eku-Mission Street, indawo yokudlela edumile yabo bobabili abantu bendawo, abaphuma kwamanye amazwe kanye nezivakashi, ehlinzeka ngokudla kwemifino kwaseNingizimu Indian ngamanani aphansi kakhulu.
I-White Town (ingxenye endala yamakoloni yasePondicherry) ingaphakathi kohambo lwemizuzu eyi-10 ukusuka e-St Theresa Road lapho uzothola khona izakhiwo ezinhle zamakholoni ezikubuyisela ezikhathini zamakholoni futhi zikunikeza umbono wokuthi useNingizimu neFrance.
Ulwandle lungaphesheya kweDolobha Elimhlophe, elinendawo enhle yokuhamba ngezinyawo lapho ungenza khona uhambo lwakho lwasekuseni, ubuke ukuphuma kwelanga noma uhambe kancane kusihlwa, ulalele amagagasi futhi uzwa nomoya opholile.
Njengoba sihlala eLondon, u-Prithika engibambisene naye uzokwenza amalungiselelo okunikeza okhiye futhi akusize kukho konke ukuhlala kwakho.